Ebe Iji Lee adọrọ adọrọ nke Street Art Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Ebe Iji Lee adọrọ adọrọ nke Street Art Na Europe
Street art bụ oge a na ụdị nkà okwu na-eme ka anyị obodo ọzọ mara mma. A ọma n'okporo ámá mural nwekwara ike-akpali gị na-eche banyere a mmadụ mkpa isiokwu ma ọ bụ na-echetara gị nke ọrụ oge gboo nwe.
Obodo Europe juputara nnukwu ebe nke jubigakwara ókè na n'okporo ámá na nkà na graffiti. Ị nwere ike na-ogologo na-ejegharị site na n'okporo ámá ezigbo murals na mgbe-Ịnọ nkịtị gwụrụ. Ebe a bụ ụfọdụ na-adọrọ mmasị n'okporo ámá art na ebe ahụ ya na Europe:
Street Art na London
London bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma obodo ndị ghọtara n'okporo ámá art na nka onwe ha. N'etiti n'okporo ámá ị nwere ike ịga na-esi gị dose of mma art, Camden na Shoreditch kwụpụta. Otú ọ dị, Adobe Lane na Southbank na-ọma-mara ebe, oke. ka, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ndị kasị ama ebe, isi Shoreditch.
Paris jupụtara nke n'okporo ámá bu na-ekpo ọkụ n'ebe, dị ka ha na-emekarị n'ihe dum n'okporo ámá. Head na 10th na 11 arrondissements site ruu Saint-Maur. Ọ bụ jupụtara Shepard Fairey nwa-na-na-acha ọcha osise na mgbidi ụlọ, nke na-eme ya a oké ije. Nke a 2km ogologo n'okporo ámá intersects na ruu Oberkampf, ihe na-akpali ebe a n'okporo ámá art n'ọnọdụ.
Berlin si East Side gallery bụ otu nke kasị mma ebe n'ụwa maka ndị na-enwe n'obodo ukwu ndị art. Obodo ya nwere a-esetị n'okporo ámá art idaha, ikekwe kacha mma atụ Kreuzberg na Mitte. E nwere ihe abụọ na distrikti na maa mma n'ime alleyways na iconic n'okporo ámá art iberibe. Head n'ebe ọwụwa anyanwụ ọgwụgwụ nke Kreuzberg district ịchọta kacha mma art.
Street Art na Rome
Rome nwere a nkume ụzọ ịnakwere n'okporo ámá art, ma nke a mara mma obodo na-now akpatre ikwe ndị mepere emepe na art mpia na-egosipụta onwe ha. E nwere ihe ole na ole na distrikti ebe n'okporo ámá art e ji nwayọọ nwayọọ cropping elu. Otú ọ dị, ebe kasị mma ileta pụrụ ịbụ San Lorenzo, a obi na ọtụtụ vibrant graffiti. Ọ bụrụ na ị na-eleta Rome achọ ụfọdụ mara mma n'okporo ámá art, elekwasị anya na Via Enotri, Via Ausoni, Via dei Sardi na Via dei Sabelli.
Graffiti na Frankfurt
Frankfurt bụ a obodo onye nwere ike ọ gaghị na-atụ anya na-ahụ na a ndepụta n'ihi na n'okporo ámá art enthusiast, dị ka ọ nwere a ọzọ magburu onwe aha nke ịbụ a azụmahịa obodo ukwu. Otú ọ dị, onye pụrụ ịrụ ụka na ọbụna obodo ndị dị ka ndị na-susceptible ka inwe ike n'okporo ámá art okwu, ukwuu n'ime nnupụisi na a elu na-eri nke ndụ. Frankfurt nwere otutu uzo art gburugburu ọdụ ụgbọ okporo ígwè na etiti obodo. The Hall of Fame on Ratswegkreisel bụ ihe ọzọ na ebe dị mma ileta.
Amsterdam n'okporo ámá art idaha bụ nnọọ ike, na obodo mepere emepe art esịmde ọbụna ngosi nka ngosi. Ebe kasị mma na Amsterdam maka n'okporo ámá art bụ Spuistraat, Wijdesteeg, na NDSM, tinyere obodo center ebe. I nwekwara ike na-n'okporo ámá art tour si Amsterdam Central Station. The eziokwu na nke a tour dị na-agwa gị ezu banyere otú mpako obodo a bụ nke ya n'okporo ámá art.
Copenhagen bụ a obodo ukwu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ụfọdụ yi na ihe n'okporo ámá art - ọbụna na nke ndị mmadụ! Christiania bụ ebe ị ga-ahụ na nke kacha mma ọrụ nke nkà mepere emepe nka, wee jide n'aka na ọ bụghị uche ya.
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịhụ ndị kasị mma uzo art Europe nwere na-enye; obodo ndị a niile na-adị mfe iji ụgbọ okporo ígwè. AKWỤKWỌ gị tiketi na oge na-akwadebe na-akpaliwo mmasị!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffascinating-street-art%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)